Mashandiro ebasa - Wevino.store
1.1 Hatisi kuzotengesa kana kuendesa doro kune chero munhu aripo, kana anoratidzika kunge ane makore ari pasi pegumi nemasere. Kana nekuisa rairo unoratidza kuti une makore gumi nemasere uye tinochengeta kodzero yekurega kuburitsa kana tisina chokwadi nezve izvi.
1.2 Muchiitiko chekuti chigadzirwa hachiwanikwe kana iwe ukaisa odha yako, tinobata iwe kuti tigadzire kutsiva, kana imwe gadziriro yekupedzisa odha yako.
1.3 Kuisirwa odha chero kupi pawebhusaiti yedu hakuiti chibvumirano, chinoitwa chete kana tagamuchira odha yako nekugadzirisa kubhadhara.
1.4 Isu tinochengetera kodzero yekusagamuchira chero kuraira.
1.5 Zvinhu zvese zvinopihwa zvichienderana nekuwanika.
2.1 Zvekuraira kwezvinhu zvese hwindo rekutakura rinosimbiswa panguva ye checkout maitiro. Tichaita zvese zvatinogona kuti tisangane neiyi nguva yakatarwa asi isu hatigamuchire mutoro wezvinhu izvo zvinokundikana kusvika mukati meiyi hwindo nekuda kwemamiriro ezvinhu atinoona kunge ari pamusoro pekutonga kwedu.
2.2 Zvekutakura isu tinonyanya kushandisa UPS sevhisi yebasa. Ino yekutakura inozoedza chete kuendesa zvinhu katatu mushure kwaizvozvo zvichadzoserwa kuWevino Chitoro. Muchiitiko ichi kana kana zvinhu zvadzorerwa kwatiri nekuda kwekero isiriyo kana isina kukwana yekuendesa yakapihwa newe tinochengetera kodzero yekupfuudza pamutengo wekuwaniswazve.
2.3 Nguva dzekufambisa dzinosiyana zvichienderana nebasa & kwainoenda. Zve `` Zororo reNyika '' odha, nguva dzekuendesa dzinosiyana zvichienderana nenzvimbo.
2.4 Chero ipi mitero yemunharaunda yemitero nemitero ibasa remutengi. Hatigone kuve nemhosva kune chero imwe mari yekuwedzera inobhadharwa netsika dzemuno. Dunhu rako remunharaunda rinogona kuda mapepa, zvitifiketi kana mamwe magwaro kubvumidza kupihwa zvinhu zvacho. Kugadzirira / kutenga kwemapepa iri chete basa revatengi. Chero kunonoka kune chekuita nezviito zvemahofisi etsika dzemo hakuzove iro basa reWevino.store
3.1 Mitengo yese yakanyorwa pane ino saiti inosanganisira VAT 22%.
3.2 Kunyangwe isu tichiedza kuona kuti zvese zvemitengo ruzivo pane ino webhusaiti ndeyechokwadi, dzimwe nguva kukanganisa kunogona kuitika & zvinhu zvinogona kunge zvisina mutengo. Kana isu tikazoona kukanganisa kwemutengo isu, nekuziva kwedu, kana: kutaura newe & kukubvunza kana iwe uchida kukanzura odha yako kana kuenderera neodha nemutengo wakakodzera; kana kukuzivisa kuti tabvisa odha yako. Hatisi kuzomanikidzwa kupa zvinhu nemutengo usiri iwo.
3.3 Isu tinochengetera kodzero yekugadzirisa mitengo, zvinopihwa, zvinhu uye kutaurwa kwezvinhu muzvinhu zvedu kungwara chero nguva tisati tagamuchira odha yako. Iko zuva rekupedzisira rinotsanangurwa pane chero kupihwa kupi pawebhusaiti, inoitirwa segwara chete. Wevino.store inochengetera kodzero yekuchinja mitengo chero nguva.
4.1 Tichapa mari izere yekudzoserwa kana kutsiva chero waini inokanganisa. Izvi hazvikanganise kodzero dzako dzemutemo.
4.2 Tinogona kuda kuti mabhodhoro asina kukwana adzoserwe kwatiri. Isu ticharonga izvi sezvazvinodiwa paunenge uri nyore.
5.1 Muchiitiko chekunyunyuta ndapota email support@wevino.store uchipa zvakadzama sezvaunogona. Zvese zvichemo zvichatambirwa mukati memaawa makumi mana nemasere & unogona kutarisira kugadzirisa kwakazara kwekunyunyuta kwako mukati memaawa makumi manomwe nemaviri Iwe unozochengetedzwa kuziviswa kana paine chero kunonoka kupfuura izvi. Chichemo chega chega chichaonekwa sechakavanzika & chichatarisirwa nemaneja mukuru.
6. Kuchengetedza utsotsi
6.1 Nezvinangwa zvekudzivirira kana kuona mhosva, uye / kana kutya kana kumhan'arwa kwevanokanganisa, tinogona kugovera chero ruzivo rwatinotora nemapurisa, mamwe masangano ehurumende kana akazvimirira kana masangano anomiririra zvinoenderana nemutemo wakakodzera. Ruzivo rwakagovaniswa nenzira iyi haruzoshandiswe kushambadzira.
7. Ongororo, Makomendi uye Zvemukati
7.1 Vashandisi ve ino webhusaiti vanogona kutumira wongororo, makomendi uye zvimwe zvirimo. Kodzero iyi inowedzerwa nemamiriro ekuti izvo zvirimo hazvisi pamutemo, zvinonyadzisa, zvinoshungurudza, zvinotyisidzira, zvinosvibisa, zvinokanganisa kuvanzika, kutyora kodzero dzenzvimbo dzehungwaru, kana zvimwe zvinokuvadza kune vechitatu mapato, kana zvinopesana. Zvikurukuru, zvemukati hazvifanire kusanganisira mavhairasi esoftware, mushandirapamwe wezvematongerwo enyika, kukumbira kwekutengeserana, tsamba dzecheni kana tsamba dzekutumira vakawanda.
7.2 Iwe haugone kushandisa nhema email kero, kuteedzera chero munhu kana chinongedzo, kana neimwe nzira kutsausa nezve kwakatangira chero zvemukati zvemukati.
7.3 Tinochengetedza kodzero, asi kwete chisungo, kubvisa kana kugadzirisa chero zvemukati.
7.4 Kana iwe ukatumira zvemukati kana kutumira zvinhu, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira iwe:
Grant Wevino.store & makambani ayo akabatana kodzero isiri-yakasarudzika, yemubhadharo-isina kodzero-yakakwana yekushandisa, kubereka, kushambadza, kugadzirisa, kushandura, kushandura, kugovera, kugadzira zvigadzirwa kubva & kuratidza izvo zvirimo pasi rese mune chero mhizha.
Grant Wevino.store & vanobatana nayo & ma-sub-rezinesi kodzero yekushandisa zita raunotumira maererano nezvakadai, kana vachisarudza.
Bvumiranai kuti kodzero dzamunopa pamusoro hadzichinjiki panguva yekudzivirirwa kwekodzero dzenyu dzepfuma dzakabatana nezvakanyorwa & nezvinhu zvakadaro. Unobvuma kuregeredza kodzero yako yekuzivikanwa semunyori wezvakadai & kodzero yako yekupokana nekuzvidzwa kurapwa kwezvakadai.
Iwe unomiririra & waranti yekuti iwe muridzi kana neimwe nzira kudzora ese maruramiro kune izvo zvemukati zvaunonyora; kuti, sepane musi wekutumira izvo zvinyorwa kana zvinhu kuWevino.store, izvo zvirimo & zvinhu ndezvechokwadi; kushandiswa kwezviri mukati uye zvinhu zvaunopa hazviputse chero mitemo yeWevino.store kana nhungamiro uye hazvizokonzere kukuvadza chero munhu kana sangano (kusanganisira kuti izvo zvirimo kana izvo zvinhu hazvisi zvinosvibisa). Unobvuma kubhadharisa Wevino.store & vanobatana nayo yezvese zvirevo zvakaunzwa nechetatu kupokana neWevino.store kana vanobatana navo vanobuda kana mukubatana nekutyorwa kwechero ipi yeiyi waranti.
Mifananidzo yese yezvigadzirwa pa wevino.store inotorwa kubva kuvhura masosi uye ndeye ruzivo rwezvinangwa. Mirairo inofanirwa kuve inoenderana nekudzikiswa kwezvigadzirwa, asi kwete kumifananidzo nemifananidzo sekusawirirana kunogona kuoneka.
8.1 Pakutanga ndapota nyorera chitoro neemail, fakisi kana runhare, sezvakaratidzwa pane yako email yekusimbisa email uye pawebhusaiti.